In Ever Loving Memory of Saya Kan Chun – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ဆရာကံချွန် ကွယ်လွန်သွားကြောင်းကို ကွယ်လွန်ပြီး နောက်တစ်ရက်မှ ကျွန်တော်သိရတယ်။ ရင်ထဲမှာ ဆို့ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်လောဆီက သူ့ကို သတိရလို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ သူ ဆေးရုံက ဆင်းလာခါစဆိုတာ သိရတယ်။ သိပ် နေမကောင်းဘူးပေါ့။ သည်လောက်ပဲ။ ဒါနဲ့ သူနဲ့ ပိုရင်းတဲ့ ဆရာမောင်ဝဏ္ဏကို ပြောပြမိတော့ ဆရာမောင်ဝဏ္ဏက ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီး စုံစုံ သိနေတယ်။ ဆရာ့ အပြောအရ ဆရာကံချွန့်အခြေအနေ မကောင်းဘူးတဲ့။
ကျွန်တော်နဲ့ ဖုန်းပြောတုန်းမှာတော့ ဆရာကံချွန်က အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်စရာ ရှိသေးတဲ့အကြောင်း ပြောတာကို အမှတ်ရနေတယ်။ အဲဒါ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဆုံတာ နောက်ဆုံးပါပဲ။
အမှန်မှာတော့ ဆရာ ကံချွန်နဲ့ လူချင်း သေချာသိခဲ့တာ ၂၀ဝ၅ခုနှစ်ကမှပါ။ သို့သော် တစ်ယောက်စာ တစ်ယောက် ရင်းနှီးနေလို့လားတော့ မသိဘူး၊ ခဏချင်းနဲ့ တအား ရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။ သို့သော် ဆရာနေတာက မန္တလေး၊ ကျွန်တော်နေတာက ရန်ကုန်ဆိုတော့ ထပ်ဆုံဖို့က အခက်သား။
၂၀ဝ၆-၂၀ဝ၇လောက်အထိက ကျွန်တော်က မန္တလေးကို အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်လို သွားဖြစ်နေတာမို့ အဆင်သင့်တဲ့အခါ ဆရာကံချွန့်ဆီ ဝင်ဖြစ်တယ်။ မဝင်ဖြစ်တောင် ဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ်။ မေ့လောက်ရင် တစ်ခါလောက် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ဖုန်းနဲ့ လေကန်ဖြစ်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။
သို့ပေမယ့် ကျွန်တော် ဆရာကံချွန့်ကို အင်မတန် ချစ်သွားစေတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ကြားမှာ ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါလေးက လူသိရှင်ကြားလို့ တစ်ဖက်က ဆိုနိုင်ပေမယ့် လူ သိပ်မသိလိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်နေပြန်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ အတုခိုးစရာ အင်မတန်မှ ကောင်းလှတဲ့ ဆရာကံချွန့်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကလေးမို့ ဆရာ့ကို လွမ်းလွမ်းနဲ့ အဲဒါလေးကို တင်ပြလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျား။
ဖြစ်ပုံက သည်လိုပါ။ အများသိတော်မူတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်တိုက် ရှိပါတယ်။ အဓိကက ကျွန်တော့်စာအုပ် ကျွန်တော် ထုတ်တာပါပဲ။ သို့သော် တခြား ဆရာများရဲ့ စာအုပ်များကို ထုတ်ချင်တဲ့ အာသီသကလည်း ကျွန်တော့်မှာ အပြင်းသား။ သို့သော် နှုတ်ခမ်းမွှေး မနိုင်ဘဲ ဘီယာ မော့ချင်တတ်သူလိုဖြစ်နေပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ထွက်သွားတဲ့ ဆရာသုမောင်ရဲ့ “ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ မောင်ဗလ”ဆိုရင် ဆရာသုဆီက စာမူ ယူထားပြီး သုံးနှစ်ကျော်ကာမှ စာအုပ်ဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ ကျွန်တော့်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်တဲ့ ဆရာမောင်ထွန်းဦး(မိုးကုတ်) စာအုပ်ဆိုလည်း တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှ ထွက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါလည်း အမှတ်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က စာမူ တောင်းမိတတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာ ကျွန်တော် သိပ်ထုတ်ချင်နေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်က ဆရာ တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ရဲ့ “ဆိုခဲ့ရ ကျွန်တော့်ဘဝပါဗျာ” ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိပါ။ အဲဒါကို ဆရာထွန်းနောင်က မဟာမဂ္ဂဇင်းမှာ အခန်းဆက် ရေးခဲ့တာပါ။ စတီရီယို ခေတ်ဦး သမိုင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စတီရီယိုလမ်းသစ်ကို စတင် ဖောက်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ ဆရာထွန်းနောင် ကိုယ်တိုင်က ရေးထားတာမို့ အင်မတန့်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ အဲဒါကို ထုတ်ချင်တော့ ဆရာ့ဆီက တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးခဲ့ပါတယ်။ (ကနေ့အထိ စာအုပ် ဖြစ်မလာတတ်နိုင်သေးတာကတော့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းမွေး မနိုင်မှုပါ။)
ဆရာထွန်းနောင်ရဲ့ စာမူ တစ်နေရာမှာတော့ ၁၅-၅-၇၁နေ့စွဲပါ ရှုဒေါင့် (ဟိုတုန်းက သတ်ပုံအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ သတ်ပုံမှန်က “ရှုထောင့်” ဖြစ်ပါတယ်။) ဂျာနယ်ထဲမှာ “မောင်ကံချွန်”ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာက “တက္ကသိုလ် ထွန်းနောင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အဲဒီ့အချိန်က ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုကို ရယူနေတဲ့ ဆရာထွန်းနောင်ကို ကောင်းကောင်း တွယ်ထားတဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရပါတယ်။ ဒါမျိုးကျ ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့ဘူး။ သည်မှာတင် ဆရာကံချွန့်ကို လှမ်းဖုန်းဆက်မိရပါတော့တယ်။
အဲဒါကို ဆရာကံချွန်က ၂၀ဝ၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်းမှာ “ကံချွန်ရဲ့ ဆူးလှည်း – တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင် ဖတ်ဖို့”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကံချွန့် ဆောင်းပါးကို ဦးစွာ ဖော်ပြပါရစေ။
၁၆၊၉၊၂၀ဝ၅ ရက်နေ့ ၁၁နာရီလောက်မှာ အတ္တကျော် (atk) ဖုန်းဆက်တယ်။ atk က သူပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို အရေးမကြီးသလို ပြောပြီး အရေးမကြီးတာတွေကို များများပြောပါတယ်။ ဒါ သူ့အကျင့်လေ။ အရေးကြီးတာလို့ ယူဆထားတာကို ပြောရမှာ အားနာပုံရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ဆရာ တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင် ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို စုထုတ်မယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဆရာထွန်းနောင်က ကံချွန့် နာမည် ထည့်ရေးထားတာ ပါတယ်။ မဟာဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးတဲ့ဆောင်းပါးပါ။ သိတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ မဖတ်ရသေးဘူးလားတဲ့။ ဟင့်အင်း။ စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး စာမဖတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် တိုးပြီတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကံချွန်ရဲ့ အချိန်ဇယားမှာ စာရေးချိန်က ၉၀ ရာနှုန်း နေရာ ယူထားပါတယ်။ ၁၀ ရာနှုန်း စာစုံအောင် လိုက်မဖတ်နိုင်ပါဘူး။ (မဖတ်ချင်တာမဟုတ်ပါ) မဖတ်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာ မဟာလည်း ပါသွားပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်တာက လက်ဆောင်ရတဲ့ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေပဲ။
atk က “လေးလေး…သူ့ကို ဝေဖန်ဖူးတယ်နော်”တဲ့။ ဝေဖန်ဖူးတယ်။ ရှုဒေါင့်ဂျာနယ် (ယခင်စာလုံးပေါင်း) ကပါ။ မဟာမှာ အဲဒီဝေဖန်တာတွေ ထုတ်ပြပြီး ပြန်ရေးထားတယ်ပေါ့။ အဲဒါကို သူလုပ်မယ့် စာအုပ်မှာ ထည့်မယ်ပေါ့။ သည်အခါ ကံချွန်က…
“ထည့်ပါ…ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကံချွန်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ထွန်းနောင်အပေါ် အမြင်ကို ထည့်သလို သည်နေ့ ကံချွန်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ထွန်းနောင်အပေါ် အမြင်လည်း ထည့်ပါ ရေးပေးပါ့မယ်”
“မဖတ်တော့ဘူး။ ဖတ်ရင် တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်က ရေးတာကို အကြောင်းပြုပြီး ပြန်ရေးတယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့။ မဖတ်ဘဲ ရေးရတာကိုပဲ လိပ်ပြာသန့်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော်ရဲ့ သည်နေ့ ခံယူချက်၊ သဘောထား အမြင်ဆိုတာ ရှင်းနေမယ်။ ခင်ဗျား ဆရာထွန်းနောင် တွေ့ရင်သာ ပြောလိုက်ပါ”
“သည်နေ့ အမြင်က ဘယ်လိုလဲ”
“အဲဒါ တစ်နေရာရာမှာ ရေးပါလား”
ဒါတွေက ကံချွန်နဲ့ atk ဖုန်းနဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ စကားတွေပါ။ ဖုန်းပြောပြီး တစ်နာရီလောက်ကြာမှ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း တစ်နေရာရာကနေ တရားဝင် ရေးသင့် ပြောသင့်တယ်လို့ မြင်လာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ နီးပါးက (ထင်တယ်) ဝေဖန်ခဲ့တုန်းက ကံချွန်ရဲ့အမြင်ကို ဂျာနယ် စာမျက်နှာထက်ကနေ ရေးခဲ့တာပဲ။ သည်နေ့ သူ့အပေါ်ဆိုတာထက် သူဆိုခဲ့တဲ့ ဂီတအမျိုးအစားအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားကိုလည်း စာမျက်နှာထက်ကပဲ ရေးသင့်တယ်။ ဒါမှ တရားရာ ကျမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
ခေတ်ပေါ်ဂီတသစ် တစ်ခုကို ဗြုန်းစားကြီး တွေ့လိုက်ရတုန်းက ဟီးနိုး ကားရှည်ကိုတောင် ရန်ကုန်က ဘုရားဖူးလာမှ တွေ့ဖူးတဲ့ ကံချွန်ဟာ ကောင်းကင်က ပြုတ်ကျလာတဲ့ လဆင်းယာဉ်ကို တွေ့လိုက်ရသလို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒုက္ခပါပဲ။ ဘာကြီးမှန်း မသိဘူး။ သည်ဟာကြီးရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုမယ်ပေါ့။ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာ မမှားဘူး။ ရမ်း လက်ခံလို့ မဖြစ်ဘူး။ ရည်းစား လိုချင်တာပဲ။ အမေကို ပူဆာရသလား။ ဒါဟာ အမေ မသိအောင် ရည်းစားထားတဲ့ အစဉ်အလာကို ချိုးဖောက်တာပဲ။ လက်မခံနိုင်ဘူး။
အဲသလို အဲသလို ခံစားရချိန်ဟာ ကံချွန် အသက် နှစ်ဆယ်ကျော်။ ကံချွန်ရဲ့ပညာအရည်အချင်းက ဆယ်တန်းမအောင်။ နေရတာက မန္တလေး ဆိုပေမယ့် မြို့ပခုံးသာ။ ရွာဓလေ့ ကြားမှာ။ ရွာလယ်က ရေတွင်းကုန်းမှာ ထိုင်ပြီး ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ တစ်လှည့်၊ မခင်နှင်းဆီ တစ်လှည့် အော်နေသူတွေ ကြားမှာ ကံချွန်က ချောကလျာကို ကြိုက်တာနဲ့တင် တော်တော် ခေတ်မီတာပဲလို့ အသတ်မှတ်ခံ ထားရချိန်။ ပြား ၆၀ ကောင်ပေါ့။ (ကျပ်မပြည့်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။) စာရေး စာဖတ်ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဝါသနာပါတယ်။ စာရေးဆရာ မြင့်ကျော်ရဲ့ ဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ သနားလာလို့ အစ်မသာ ရှိရင် ပေးချင်တဲ့ အကြောင်း စာရေးဖူးတယ်။ ဇာတ်ကောင်တွေက စာရေးသူကို ကိုယ်စားပြုနေတာလို့ ထင်ထားတာကိုး။ ကံချွန်က အသည်း နုတယ်လေ။ သူက လွမ်းပြတော့ ကံချွန်က ငိုချင်တာပေါ့။ အဲသလို ငတိဟာ တစ်ခုသော မန္တလေးသင်္ကြန်မှာ “အခါတော်ရောက်ချိန် နီးလို့လာပေ”ဆိုတဲ့ တေးသံကို နားထောင်ဖို့ ချီတက်လာတုန်း ဗြုန်းဆို ”မာမီရယ် ရှာပေးကွယ်”ဆိုလာတဲ့ တက္ကသိုလ် ထွန်းနောင်နဲ့ ဆုံလိုက်ရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးရှင်ကံချွန်ရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆ အသိဉာဏ်ကို တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင် မှန်းဆ ပုံဖော်လို့ ရလောက်ပါပြီ။ “သဘောထားပုံ”ဟာ အဲဒီလူရဲ့ ဘဝအခြေအနေ တစ်ခုလုံးမှာ အခြေခံတယ်ဗျာ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအခြေအနေဟာ အပြောင်းအလဲ မရှိရင် အတွေးအခေါ်ဟာလည်း ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုတော့ ကျွန်တော်ဟာ အသက် ၆၀ ပြည့်တော့မယ့်အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ အင်တာနက်ခေတ်၊ စလောင်းခေတ်၊ ကွန်ပျူတာခေတ်၊ အီးမေးလ်ခေတ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ ကံချွန်ဆိုတဲ့ ငတိက ခေတ်မီအောင် ကြိုးစားတာ မဟုတ်ပေမယ့် မြို့သစ်က လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကိုပဲ ကမ္ဘာတစ်ဘက်ခြမ်းမှာ ကန်တဲ့ ဘောပွဲ ငုတ်တုတ် ထိုင်ကြည့်လို့ ရနေပြီကိုး။ နိုင်ငံတကာ တေးသံရှင်တွေရဲ့ စတိတ်ရှိုးတွေကို မျက်တောင်မခတ်တမ်း ငေးလို့ ရနေပြီကိုး။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ကို ရေးခဲ့မိတဲ့အတွက် အမြတ်တစ်ခုပဲ ဘဝအတွက် ရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခံစားမှုကို အကြောင်းပြုပြီး ရေးခြင်းဟာ “အမှား” မကင်းနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အချိန်ကာလ တစ်ခုထိ စောင့်ကြည့်ရမယ့် အရာတွေကို မဝေဖန်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အသိ ရလိုက်တာ အမြတ်ပါပဲ။ ကျွန်တော် အဲဒီ အမြတ်ရဖို့ ဆရာတက္ကသိုလ်ထွန်းနောင် ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အားလည်း နာခဲ့တယ်။ ခုမှ မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကတည်းက။
ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ အိမ်မှာ ကိုစံမြင့် (တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ရဲ့ ဦးလေး)နဲ့ ဆုံကြကတည်းက။ ဆူးကို အပ်နဲ့ ထွင်းရမယ့်အစား ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်သလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအသားအတွက် တောင်းပန်ချင်ခဲ့တာပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အာဃာတ မရှိပေမယ့် ထိခိုက် နစ်နာသွားရပြီ ဆိုတာကို သိနေခဲ့လို့ပေါ့။ ပြီးတော့ အသစ် မွေးဖွားလာတဲ့ အနုပညာသစ် တစ်ရပ်အပေါ်မှာလည်း အချိန်ပေး စောင့်ကြည့်တာ မလုပ်ခဲ့မိလို့ပေါ့။
atk ဖုန်းဆက်လို့ သည်စာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ atk ကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားအပေါ် ဆိုတာထက် အနုပညာအသစ် တစ်ခုအပေါ် ကိုယ် နားမလည်တာနဲ့ အဆိုးမြင်ခဲ့ဖူးတာကို ဝန်ခံခွင့်ရလို့ ကျွန်တော်က ကိုယ် မှန်တယ်လို့ ယူဆတာကို ရေးခဲ့သလို ကိုယ်လွန်သွားခဲ့တယ်၊ ကျွံသွားခဲ့တယ်၊ မှားသွားခဲ့တယ်လို့ မြင်ရင်လည်း ချက်ချင်း ပြင်ဖို့ ဝန်မလေး ပါဘူး။ (ခင်ဗျားနဲ့ ကိစ္စမှာတော့ အများကြီး နောက်ကျသွားတယ်)။
စာကြွင်း။ ။ ခင်ဗျား ရေးထားတာ ကြုံရင် ဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ်။ သည်ဆောင်းပါး (ပေးစာ) မရေးခင်အထိ မဖတ်တာကတော့ သည်ဆောင်းပါးဟာ ဘယ်လို ရိုက်ခတ်မှုမှ မပါတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆန္ဒ သဘောထား အမှန် ဖြစ်ချင်လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော် ဘာ့ကြောင့် ဆရာကံချွန့်ကို ချစ်သွားသလဲဆိုတာ စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းများ ရိပ်စားမိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဆရာကံချွန့်ဆောင်းပါးက တိုပါတယ်။ ကျစ်လစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားတွေ အများကြီး ပြောသွားတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဖုန်းပြောခန်းမှာ သူရေးသွားသလိုပဲ ဟိုးအရင်က သူ့အမြင်နဲ့ ကနေ့ သူ့အမြင် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတာကို ဆရာက ဝန်ခံတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒါကို တစ်နေရာရာမှာ ရေးပါလားလို့ ဆရာကံချွန့်ကို ပြောမိတယ်။
ဆရာက တကယ့်ကို အဲဒါကို ရေးချလိုက်ပါတယ်။ ရေးချတဲ့အခါမှာ ဆရာကံချွန်က ဟိုအချိန်က သူ့အခြေအနေကို လှစ်ခနဲ ပြသွားတယ်။ အဲတုန်းက အမြင်နဲ့ ကနေ့အမြင်က မတူနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကို သုံးသပ်ပြရင်း ခံစားမှုကို အကြောင်းပြုပြီး စာရေးရင် အမှားမကင်းနိုင်တာ၊ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့အရာတွေကို မဝေဖန်သင့်တာများကို အဓိက အချက်များ အဖြစ် ကောက်ချက် ဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူမှားခဲ့တာကို ဝန်ခံသွားပါတယ်။
ဆရာကံချွန် ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို ရရချင်းမှာ သည်အချက်တွေက ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဆရာကံချွန် တစ်ယောက် မြင့်မြတ်ရာ ဘုံဘဝကို ရောက်သွားမယ် ဆိုတာလည်း မလွဲဘူးလို့ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်။
ဆရာ့စာထဲမှာ “လိပ်ပြာသန့်တယ်”ဆိုတဲ့ အသုံးပါတယ်။ ဆရာဟာ ဖြူစင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သလို လိပ်ပြာသန့်လိုသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အထက်က ဆောင်းပါးနဲ့တင် ထင်ရှားနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ဆရာဟာ မိမိ အမှားကိုလည်း ပြန်မြင်နိုင်သလို ဝန်ခံဖို့လည်း လက်မနှေးခဲ့ဘူး။ ဆရာထွန်းနောင်အပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်က စာကြွေးတင် သွားခဲ့တာကိုလည်း စာနဲ့ပဲ မိမိရရ ပြန်ဆပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သည်တော့ ဆရာ့မှာ လိပ်ပြာက သန့်သထက် သန့်နေမှာ ဖြစ်တာမို့ ဘဝကူးကလည်း မလွဲမသွေ ကောင်းနေတော့မှာပါ။
ကျွန်တော်တော့ ဆရာကံချွန့်ကို အရမ်း အားကျမိသလို အတုလည်း ခိုးနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း နှေးတာနဲ့ မြန်တာပဲ ကွာမှာပါ၊ ဆရာကံချွန့် နောက်ကို တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့တော့ မလွဲမသွေ လိုက်ကြရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာကံချွန့်လို ကျွန်တော်တို့တွေ တကယ် လိပ်ပြာ တကယ် သန့်သန့်နဲ့ ဘဝကူးနိုင်၊ မကူးနိုင်ဆိုတာကျတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မနောကံ၊ ဝစီကံ၊ ကာယကံများအပေါ်မှာ တည်နေမယ်လို့ တွေးနေမိရပါတယ်။
ဆရာကံချွန်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းကောင်းလေးတစ်ခု ပြကာ သံသရာခရီးကို ဆက်နှင်သွားပါပြီ။
စာပြီးနေ့နဲ့ အချိန် – ၂၂၀၈၀၉ (ဝ၂၄၁)
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် ထုတ် Bi Weekly Eleven Journal အမှတ် ၂၆ အတွဲ ၂မှာ ဖော်ပြထားတာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။ Comment လေးတွေ ရေးကြပါဦး လူကြီးမင်း အပေါင်းတို့ရေ…. အခုတစ်လော လာလည်သူ အင်အားက သိပ်လျော့မသွားပေမယ့် comment က သိသိသာသာ လျော့နေတော့ ပို့(စ်)တင်ရတာ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိ၊ အားမလို အားမရ ဖြစ်နေရပါတယ်။ ပရိသတ်မင်းများဆီက ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်၊ ယုတ်စွအဆုံး ဆဲတာလေးမှဖြစ်ဖြစ် မခံရဘူးဆိုရင် စာရေးတဲ့သူများမှာ အစာမကြေ ရင်မချောင် ဖြစ်ရတတ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်ပေးတော်မူကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို သနားသောအားဖြင့် ရေးကြပါနော်…
Author lettwebawPosted on 17 September 2009 14 July 2017 Categories Memoirs, Reproduction
17 thoughts on “In Ever Loving Memory of Saya Kan Chun”
17 September 2009 at 6:23 pm
ဆရာ ကွန်မန့် မျှော်တတ်လာရင် ဘလော့ဂါ ပီသလာပြီ။
ဆရာရေ.. လူတယောက်ဟာ ရိုးသာဖို့ လိုသလို မျက်လုံးပြူးဖို့လည်း (အမြင်ကျယ်တာကို ပြောချင်တာပါ) လိုပါတယ်။
ဆရာစာတွေကို ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကွန်မန့်တွေ အပုဒ်တိုင်း မရေးဖြစ်တော့ ဘလော့ဂ်လောကရဲ့ စာမူခပေးဖို့ တာဝန်မကျေသလို ဖြစ်သွားတယ်။
လူတစ်ယောက်ထက် ပိုအရေးကြီးတာက စာနယ်ဇင်းပါ။ စာနယ်ဇင်းက ရိုးသားမှ၊ အမြင်ကျယ်မှ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ခိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာကံချွန့်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ၄၀နီးပါးက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်ဟာလည်း အမြင်မကျယ်တာတော့ သိပ်သေချာပါတယ်။ ရိုးရော ရိုးသားရဲ့လားလို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ မျက်မှောင်ကုပ်မိသွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယူတတ်ရင် ဘာဝနာဆိုသလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ တကယ့် သင်ခန်းစာပါပဲ။
17 September 2009 at 8:21 pm
စာရေးဆရာရဲ့ ဘလော့မှာ ကောမန့်ရေးရမှာ ရှိန်ပါသရှင်….။
အဲဒါကြောင့်ပါ… စာတွေ ပြန်တင်ပေးတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်တာပါ..။
မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးလိုမျိုး၊ ဝတ္ထုတိုမျိုးကို ပိုငတ်နေတာလေ…။
17 September 2009 at 8:31 pm
အဲဒါ ခက်တာပဲနော်။ ကျွန်တော်က စာရေးဆရာဆိုပေမယ့် ရိုးရိုးစာရေးဆရာ မဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျ။ ဘလော့ဂါဖြစ်သွားပြီ။ ဟို ဆရာ kz ရေးသလို ဘလော့ဂါ သိပ်ပီသနေတဲ့အချက်ကို မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အဲဒီ့ဆရာပြောသလို ဘလော့(ဂ်) လောကရဲ့ စာမူခ ပေးသလိုပဲ သဘောလေးထားပေးတော်မူပါနော်။ မရှိန်ပါနဲ့။ (အမလေး… ပြောရတာ အားငယ်လိုက်တာ :D)
17 September 2009 at 8:33 pm
ကော်မန့်ရေးပေးပါဆိုတော့လည်း ရေးပေးရတော့မှာပေါ့ 🙂
အခုတင်ထားတဲ့တဲ့ပို့စ်ကိုတော့ သေသေချာချာမဖတ်ရသေးပါဘူး။ စာရှည်နေတာကြောင့်ရယ် စိတ်သိပ်မ၀င်စားကြောင့်ရယ်ပါ။
အခြားသောပို့စ်တွေမှာ ပြောချင်စရာလေးတွေတော့ရှိပါလေရဲ့။ သို့ပေမယ့် ရေးရမှာ ရှည်နေတာကြောင့်ရယ် ရေးဖို့အချိန်မရှိသေးတာကြောင့်ရယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစပြောရမယ်ဆိုတာ သေချာမစဉ်းစားမိသေးတာရယ်၊ အခြားသောအကြောင်းအကြောင်းတွေကြောင့် မရေးဖြစ်သေးတာပါခင်ဗျာ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင်တော့ ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ ဆရာ့စာတွေကို အခုလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖတ်ခွင့်ရအောင် တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆရာ့နာမည်ကို ကြားဖူးနေတာကြာပေမယ့်…. ဆရာ့စာတွေကို မဖတ်ဖြစ်ဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်က မဂ္ဂဇင်းအဖတ်နည်းတာကြောင့်ပါ။ blog တွေပဲ လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ blog ပေါ်မှာ ဖတ်ရတာကို ပိုသဘောကျတယ်။ ကျွန်တော် blog ဖတ်သက် ၂ နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ မြန်မာ blog တွေ စပေါ်စကတည်းကပေါ့။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အခု ဒီ blog မှာ ဆရာ့စာတွေ ဒီ့ထက်ပိုတင်ပေးစေချင်တာကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ အရင်ရေးခဲ့တဲ့စာတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေကို တစ်ရက်တစ်ပုဒ်လောက်တင်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။
ပြောသာပြောရတာပါ အားတော့နာလှပါတယ်။ ဆရာ့ကို အလုပ်ပို ပေးသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒီလောက် comment ဆို ဆရာကျေနပ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
17 September 2009 at 8:43 pm
သြော်… ပြောဖို့မေ့သွား…. ကော်မန့်တွေ…. လာဖတ်သူတွေရဲ့စကားသံကိုကြားချင်ရင် ဆရာ့ blog မှာ cbox လေးထားလိုက်ပါလား? wordpress မှာ cbox ချိတ်ရ၊ မရတော့ ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျ။ အကြံပေးကြည့်တာပါ။ cbox လို့ ပြောလိုက်ရုံနဲ့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
http://www.cbox.ws/ ဒါက cbox ရဲ့ site ပါ
သူများနမူနာလုပ်ထားတာ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့…. http://random.mmgenius.com/
WordPress က cbox ချိတ်လို့ မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီးပြီ။ သို့သော် အကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
17 September 2009 at 9:40 pm
ကျွန်တော်တို့ လည်း ဆရာတင်ထားတာတွေ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်…
အရင်က မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ဆရာ့ ရဲ့ စာတွေ ကို အခုမှ ပြန်ဖတ်ဖြစ်ရတော့ဆရာ ဘလော့ အသစ် တင်မယ့်နေ့ကို ပဲစောင့်ဖတ်နေတာပါ ..
comment ကိုတော့အကျင့်မရှိတာလဲ ပါတယ်..ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတာလောက်လေး နဲ့လည်း မရေးချင်တာလည်းပါတယ် …
ပြီးတော့comment ရေးရင်း ဝေဖန်ချင်တာလဲ ပါတယ်.အဲလိုဖြစ်နေတာပါဆရာရေ….
ဆရာ အလို အရ..နောက်ဆို စာဖတ်ပြီးတိုင်း comment ရေးခဲ့ တော့ မယ် ဆရာရေ……
17 September 2009 at 9:45 pm
ကျွန်တော့် ဘလော့(ဂ်) စကတည်းကမှသည် ကနေ့အထိ comment ရေးခဲ့ကြသူများ အားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက comment တွေ လျော့သွားတော့။ စိတ်က တော်တော် ငယ်သွားတာလည်း အမှန်ပဲခင်ဗျ။
ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကြီးက အခုမှ အတော်လေး နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းသွားတော့တယ်ဗျို့။ တကယ်ပြောတာပါ… 😀
ဘကြီးရဲ့ wordpress ကို အသစ်ဘာတွေများတင်ထားမလဲဆိုပြီး နေ့တိုင်းဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘကြီးရေးတဲ့အပုဒ်တိုင်းကိုလဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဥာဏ်မမှီတဲ့အပုဒ်ကျတော့ comment မပေးတတ်လို့မပေးဖြစ်တာပါ။
အားမငယ်ပါနဲ့ဘကြီးရဲ့ ခုလဲ comment တွေတော်တော်ရနေပြီပဲး)
18 September 2009 at 11:26 pm
၀င်တော့ဖတ်ဖြစ်တယ်။ comment က အချိန်မရလို့ ရေးမသွားတာ။ စာကိုလည်း stick နဲ့ save သွားပြီး သေချာဖတ်ပြီးမှ comment ပြန်လာရေးတာ။
ဆရာ့ကို အကြံပေးချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက သတင်းစာအချပ်ပိုခေါ်သလား မသိဘူးလေ။ အလယ်စာရွက်မှာ ပါတာ။ နေ့တိုင်း စောင့်ဖတ်ရတာ။ အောင်လင်းရဲ့ အရိုင်းစံပယ်တို့၊ နောက် သူပုန်အိမ်ကြီးတို့ ဘာညာလေ။ ဆရာ့ဘလော့ကို နေ့တိုင်းဝင်ဖြစ်အောင် ဆရာ့ ၀တ္ထုကို နေ့တိုင်း အခန်းဆက်အနေနဲ့ တင်နေရင် ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးမိတာလေ နော် ဆရာ။
နောက် ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ဒီမှာ ပြန်ပြန်တင်ပေးရင် ကောင်းမှာနော်။ အစောင်စောင်လိုက်မဖတ်နိုင်တော့ ဒီထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရရင် ကောင်းမှာ။ နေ့တိုင်းမဟုတ်တောင် အချိန်ရသလိုပြန်တင်ပေးရင် ကောင်းမှာ လို့ ကျွန်တော် တွေးမိတယ်။
21 September 2009 at 8:05 am
ကျွန်တော် အပြင်ကို စရောက်ကတည်းက အတွေးသစ်ဂျာနယ်ဆိုတာနဲ့လည်း ဝေး၊ ဆရာ့စာတွေနဲ့လည်း ဝေးနေတဲ့အချိန် အခုလို ဆရာ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ့လိုက်ရတော့ တော်တော်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဆရာ့ဝဘ်ပေ့ဂ်ျကို လင့်လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အခု အထက်က ဆရာကံချွန်သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်တို့ စာကြည့်တိုက်လေးအတွက် စာပေဟောပြောပွဲ ဖိတ်ခွင့်မရလိုက်တော့ဘူးလေ။ နောက်နှစ်တွေဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဆရာကံချွန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ချန်ထားခဲ့ရတာဗျ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)နဲ့ ဆရာသန်လျင်မောင်မောင်ဦးတို့ကိုပဲ ဖိတ်နိုင်ခဲ့တာကိုး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့ကာတွန်းလောကအတွက် ၀မ်းနည်းရကြောင်းပါခမျာ။
ဆရာကံချွန်ရဲ. သတင်းကိုအခုမှသိရတယ်….အရမ်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…ဆရာကံချွန် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
အခုလို web page မှာတင်ပေးတဲ့ ဆရာatk ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်…
7 October 2009 at 1:04 pm
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်.. ဆရာရဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး ကြားလိုက်ရတာက… ဆရာတက္ကသိုလ် ထွန်းနောင်လည်း ယမန့်နေည ၇း၄၅ လောက်က ကွယ်လွန်သွားတယ်တဲ့…
ဆရာကံချွန်၊ ဆရာတက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်တို့ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ…. တကယ့်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါပဲဗျာ..
7 October 2009 at 4:16 pm
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဖြင့် ကြားကြားချင်း ဆို့သွားတယ်။ ဆရာနောင့် စာအုပ်ထုတ်ဖို့ကိစ္စ လုံးပန်းရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကပဲ ဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ သူကလည်း ကျွန်တော့်ဆီရောက်နေတဲ့ သူ့ပုံလေးတွေ လှမ်းတောင်းရင်း ပြန်ဆက်လို့ စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ သွားရမယ့် လမ်းမှန်း သိပေမယ့် အခုလို ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ ရင်ထဲ မချိဘူးဗျာ။ ပိုဆိုးတာက သူ့အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတာပဲ။ တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်နေရင်း ဖြစ်သွားရှာတဲ့အပြင် အခုဆို အသုဘရှင်ရယ်လို့ မည်မည်ရရ ပြစရာ မရှိတာကြီးကို မြင်နေရတော့ ပိုခံစားရတယ်။ ၆၄ နှစ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ သက်တမ်းကလည်း တိုနိုင်ရန်ကော။ ကျွန်တော်ဆို သူတို့လောက်တောင်မှ နေရပါ့မလားလို့ တွေးမိနေတာလည်း တစ်ခုပေါ့။ အဲတော့လည်း “ဖြစ်လာရလေ… တို့တစ်တွေမှာ…”ဆိုတာလေးကိုသာ ကြားယောင်နေမိပါတယ်ဗျာ။
ဆရာ့စာတွေစာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်လာခဲ့တာလေးငါးနှစ်မကပဲ..ဆရာ့ Blog ကိုဖတ်ရင်းခေါင်းငြိမ့်ခေါင်းခါတစ်ယောက်ထဲလုပ်မိပါတယ်..comment မပေးမိ ပဲဝင်ဖတ်မိရုံတင်ပါ…
ကိုကြီးကျော်ခင်ဗျား ဘဝအမောတွေနဲ့ ကျင်လည်ရင်း၊လောကဓံကို အံကြိတ်တိုက်ရင်း ခေါမ်ဖယူးတာအိမ်သာမဲကြီးဆိုတာ ဘာပါလိမ့်လို့မရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ဘဝကနေ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ ခေါမ်ဖယူးတာသုံးခွင့်ရှိတဲ့ ရာထူးလေးရလာမှလေ့လာချင်စိတ်ကလေးကြောင့် သုံးတတ်လာခဲ့ ရတဲ့ အညတြ တစ်ယောက်ပါဗျာ။ဒါတောင် အိမ်သာမဲထဲမှာ ဒီလိုစာတွေရှိနေတာ သိတာမကြာလှသေးပါဘူး။ ဆရာကြီးကံချွန်ကို မူလကတည်းကလေးစားမိပြီးသား ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုပိုသိရလို့ ပိုပြီးတော့လေးစားမိ သွားပါ တယ်။ ဆရာကြီးကံချွန်တစ်ယောက် သူတို့ရဲ့အလ္လာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာ ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေ။
Previous Previous post: Freedom of Expression (Australian Version)
Next Next post: Time Has Already Told…